Fikarohana momba ny firaisana Sarimihetsika Reincarnation Chanel & Raharaha Fiainana lasa taloha tao amin'ny Egon Schiele | Karl Lagerfeld - Fikarohana Reincarnation
Ny orinasa Chanel dia namoaka horonantsary fohy mitondra ny lohateny Reincarnation, izay omena etsy ambany, izay misy ny endrik'olon-tokana efa niaina taloha dia manana endri-javatra mitovy amin'ny mpiara-belona aminy amin'izao fotoana izao.
Ny fitoviana amin'ny endriky ny endriny dia tena tohanan'ny tranga tsy miankina amin'ny firazanana tsy miankina, anisan'izany ireo navoakan'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia.
Amin'ny fivoriana miaraka amin'ny Kevin Ryerson, Nanontany momba ny fiainana taloha an'ireo nasongadina tamin'ny sarimihetsika Chanel Reincarnation aho. Kevin dia nandefa mpitarika fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta.
Rehefa nanontany momba ny talen'ny sarimihetsika aho, Karl Lagerfeld, izay sady talen'ny famoronana tao Chanel, Ahtun Re dia nilaza tamiko fa tamin'ny lasa i Lagerfeld dia mpianatry ny hosodoko alemà Gustav Klimt.
Tamin'ny alalan'ny fikarohana no nahitako izany Egon Schiele dia mpiaro an'i Klimt izay nahavita fahagagana. Tamin'ny fivoriana iray taorian'izay dia nanamafy i Ahtun Re fa i Karl Lagerfeld no fiorenan'ny vovoka indray ny an'i Egon Schiele.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny firafitry ny tarehy Egon Schiele sy Karl Lagerfeld. Ny fisehoana ara-batana dia toa voafaritry ny fampifangaroana ny maodelin'ny fanahy sy ireo lafin-javatra lova.
Ny fiainana taloha talenta: Egon Schiele dia mpanao hosodoko tamin'ny andron'ny androny ary i Karl Lagerfeld dia mpanaingo, mpaka sary ary mpanamboatra lamaody.
Fiovam-pirenena: Egon Schiele dia Aostraliana, fa i Karl Lagerfeld kosa dia taranaka Alzeriana.